FANOMPOABE : Vita ny alatsinainy teo ny fampitampoana na fampandroana ireo “mitahy”
Ny alatsinainy teo no ivon’ny Fanompoaben’i Boeny atao ao amin’ny doany Andriamisara efa-dahy manan-kasina. 12 juillet 2017
Tamin’ny alatsinainy io no natao ny fampitapoana na fampandroana ireo “mitahy” na ny moara mitahiry ny sombin-taolan’ireo efa-dahy manan-kasina.
Raha ajoboka anaty rano no fomba fanao any amin’ny Sakalava menabe, dia fampandroana amin’ny karazana fangaro toaka sy tantely ny eto Boeny. Misy fombafomba manokana mihitsy atao amin’izany ary ireo taranaka mpanjaka sy mpiara-miasa aminy ihany no afaka manao izany. Nitarika ny fomba rehetra ny ampanjaka Rasoamody izay nasolo ny ampanjaka Djaofeno Richard. Herinandro mialoha io no efa nisokatra ny doany ka maro ireo mpanompo no manao fanatitra sy manefa adidy. Betsaka koa tonga manatitra ny voady sy manefa vava ary manao fangatahana isan-karazany. Ny alahady alina teo dia nafana ny tsimandrimandry.
Ny maraina dia nanomboka ny fombafomba rehetra hanaovana ny fampitampoana, na fampandroana ireo mitahy. Amin’ny maha hetsika ara-kolontsaina lehibe azy dia nanome voninahitra ny fanatontosana ny fomba ireo manampahefana maro eto Mahajanga, notarihin’ny Prefet sy ny Lehiben’ny Faritra. Maro dia maro ireo olona tonga na mpanompo na mpizaha tany, na mponina eto Mahajanga mba te-hahafantatra ny zava-misy ary ireo mpianatra ihany koa.
Maro ny fady tsy maintsy tandremana rehefa mankeny amin’ny doany ka anisan’izany ny tsy fahazoana manao bango tokana. Tsy maintsy manao sikina ihany koa na lehilahy na vehivavy. Hentitra kokoa ny fady rehefa hiditra ao amin’ny valamena, tsy mahazo manao kiraro sy kapa ary ny tongotra havia no miditra voalohany. Tsy mahazo manao kilaoty ihany koa izay rehetra miditra ao amin’io valamena io. Sady fady kisoa no fady akoho ihany koa ny doany.
Hetsika ara-kolontsaina mampidi-bola
Maresaka ny doany, ka ny lalana miditra mankany dia feno tranoheva isan-karazany. Ankoatra ny varotra sakafo sy zava-pisotro isan-karazany dia ahitana vokatra avy any ambanivohitra toy ny siramamy gasy koa ireo trano heva ireo. Tao ihany koa ireo zavatra ilaina amin’ny Fanompoa toy ny lambahoany sy ny maro hafa.
Ankoatra ny maha hetsika ara-kolontsaina azy dia hetsika ara-toe-karena lehibe ihany koa ny Fanompoabe. Mihodina ireo tsena isan-karazany misy eny ary betsaka ireo zavatra aterina eny :omby, volamena, volafotsy, vola, vary…
Nandritra ny folo taona izay dia tsy mitsahatra mivoatra hatrany ny zava-misy eny. Taona vitsivitsy izay no nahitana voalohany ireo jirika na tromban’ny miaramilan’ny mpanjaka, misy milaza koa hoe mpangalatra omby. Tamin’ity taona ity dia misy ny filaharam-behivavy maro miloloha ireo fanatitra. Omby marobe no misy manatitra eny, ary anisan’ny nanaritra teny koa Assanati Famo Gidraka, izay efa fantatry ny maro amin’ireo hetsika ara-tsosialy ataony eto Mahajanga.
Tsiahivina fa any Menabe ny tena taolam-balon’ireo efa-dahy manan-kasina ireo. Taorian’ny nahamay ny doany teto Mahajanga dia nisy ny iraka nandeha tany nangataka sombin-taolana, ka ireo no mitahy ao amin’ny doany Andriamisara efa-dahy ankehitriny.